Eyona Bhonasi ye-Forex yabarhwebi ngoMeyi ka-2022 🥇Iizinto eziluncedo kunye neeNgcaciso eziFihliweyo
Iibhonasi ezili-10 eziPhambili ze-Forex zabaRhwebi ngo-2022
Ukuhlaziywa: 19 May 2022
Fumana eyona bhonasi ye-forex ibalaseleyo ngamawaka wabarhwebi be-forex abasebenza kwindawo yokurhweba kwi-Intanethi, eli shishini liye lagqithiswa kakhulu kule minyaka idlulileyo. Oku kuye kwanyanzelisa amaqonga ukuba abe nokhuphiswano ngakumbi nangakumbi- ngombono wokuma ngaphandle kwesihlwele. Phambili koku kukunikezelwa kweebhonasi zangaphambili.
Ngamafutshane, abathengisi be-forex baya kubonelela ngebhonasi yokubhalisa kwabo basaza kuvula iakhawunti. Oku kuhlala kuza njengebhonasi yedipozithi ehambelana nayo, oko kuthetha ukuba idiphozithi yakho yokuqala iya kunyuswa yipesenti ethile. Ngamanye amaxesha, unganikwa ibhonasi yedipozithi.
Ukuba unomdla wokufumanisa ukuba zeziphi iibhonasi ze-forex, zisebenza njani, kwaye yintoni ekufuneka uyenzile ukubanga enye - qiniseka ukufunda isikhokelo sethu Iibhonasi ezili-10 eziPhambili ze-Forex zabaRhwebi ngo-2022.
Qaphela: Iimali zebhonasi ye-Forex zinzima kakhulu ukuba zibe yimali yokwenene. Ibhonasi iyakuhlala isiza nexabiso eliphantsi lorhwebo oya kuthi uhlangane nalo phambi kokuba kuvunyelwe ukuphuma kwemali.
Yintoni Ibhonasi ye Forex?
Kwindlela yayo esisiseko, ibhonasi ye-forex kukunyusa nje ukubhengezwa ngabarhwebi njengendlela yokukuloba kwiqonga labo. Kwiimeko ezininzi, ibhonasi iya kufumaneka kuphela kwabo bangaza kuvula i-akhawunti ngeqonga ekuthethwa ngalo. Nangona ibhonasi inokubiza imali kwi-broker ngexesha elifutshane, kuyathenjwa ukuba uyakuhlala eqongeni ixesha elide.
Kananjalo, iibhonasi ze-forex ziya zisanda ngakumbi nangakumbi kwisisa yorhwebo ntengiso isithuba. Ngokwezinto ezisisiseko, iibhonasi ze-forex zihlala zivela kwenye yeefom ezimbini-a ibhonasi kunye a akukho ibhonasi deposit. Ngokumalunga neyangaphambili, kulapho idipozithi yakho yokuqala iya kuthelekiswa nepesenti ethile, ukuya kuthi ga kwisixa esithile.
Umzekelo, umrhwebi unokubonelela abathengi abatsha nge-100% yebhonasi ehambelana ne- $ 500. Nje ukuba uqhubeke nokwenza idiphozithi, umrhwebi uya kuthi emva koko enze ityala kwiakhawunti yakho ngesixa semali yebhonasi. Xa kufikwa kwibhonasi yedipozithi, oku kusebenza kanye njengoko igama libonisa - uyakufumana ibhonasi ngaphandle kokufuna ukufaka idipozithi.
Njengoko siza kugubungela ngakumbi ngakumbi ezantsi, iibhonasi ze-forex ziya kuhlala ziza noluhlu lwemiqathango ekufuneka uyazi ngaphambi kokuba ubhalise. Ngobunzima, uyakufuneka uthengise isixa esithile ngaphambi kokuba urhoxise imali yebhonasi eyimali eyinyani.
Zithini iinzuzo kunye neengozi zeebhonasi zangaphambili?
Vumela ukuba uthengise ngemali eninzi kunokuba uyifakile
Ngokwesiqhelo iyafumaneka kubo bonke abathengisi ekusafuneka bavule iakhawunti
Ngokwesiqhelo ungasebenzisa imali yebhonasi ukurhweba ngayo nayiphi na imali
Ezinye iibhonasi zinikezelwa ngesiseko esithi 'akukho dipozithi'
Banga ibhonasi kunye nabarhwebi abaninzi njengoko ufuna
Uya kucelwa ukuba uthengise isixa esithile phambi kokuba kwamkelwe urhoxiso
Isebenza njani i-Forex Bonus?
Ke ngoku ukuba uyazi ukuba yintoni ibhonasi ye-forex, masiqwalasele imizekelo yehlabathi yokwenyani yokuba ibhonasi inokusebenza njani.
Ibhonasi yedipozithi lolona hlobo lwebhonasi luthandwayo lunikezelwa kwi-Intanethi Abarhwebi be forex. Njengoko besiphawulile ngokufutshane ngaphambili, umrhwebi uya kuthelekisa idipozithi yakho ngepesenti ethile- kwaye ibhonasi iya kuba nesixa esiphezulu esiqhotyoshelwe kuyo.
Ubanga i-100% ehambelana nebhonasi yediphozithi kunye nomthengisi we-forex.
Umthengisi we-forex uvumela ibhonasi ephezulu ye-£ 1,000, yinto ogqiba ngayo ukuyifaka.
Emva kokwenza idiphozithi yakho, umthengisi emva koko ufaka ikhredithi kwiakhawunti yakho nge-£ 1,000 eyongezelelweyo.
Ibhalansi yakho yokuqala yi-£2,000 - nangona uxhase ngemali iakhawunti yakho nge-£1,000 kuphela.
Ngokukhawuleza ukuba ibhonasi ifakwe kwikhredithi- ehlala ihlala ikho kwangoko, ungaqala ukurhweba kwangoko.
Akukho bhonasi yedipozithi
Njengoko igama lisitsho, akukho bhonasi yedipozithi ekunika ibhonasi ngaphandle kokufuna ukuba wenze idipozithi. Ezi bhonasi zifunwa kakhulu- ubuncinci kuba umrhwebi unokufumana ibhonasi ngaphandle kokubeka emngciphekweni nayiphi na imali. Ngale nto ithethwayo, akukho bhonasi yedipozithi encinci incinci xa ithelekiswa nebhonasi ehambelana nayo.
Ubanga i-£ 20 akukho bhonasi yediphozithi kunye nomthengisi omtsha wase-UK.
Uvula i-akhawunti kwaye uqinisekise ubuwena - obufunekayo ukunqanda ukusetyenziswa kakubi kwebhonasi.
Nje ukuba isazisi sakho siqinisekiswe, Forex yorhwebo indawo ke uya kutyala i-akhawunti yakho nge £ 20 akukho bhonasi yediphozithi.
Emva koko ungaqala ukurhweba ngemali yakho yebhonasi kwangoko.
Imigaqo nemiqathango yebhonasi yeBhonasi
Nangona le mizekelo ingasentla ibonisa indlela ezinokuba nengeniso ngayo iibhonasi ze-forex, ayisiyomeko nje yokufumana imali yebhonasi kunye nokukhupha imali. Ngokuchasene noko, kufuneka waziswe inani lemigaqo kunye neemeko ezithi zifakwe ngabathengisi.
Ubuncinci beMali yokuRhweba ukuRhoxisa
Eyona nto inkulu ime endleleni yokuba ukwazi ukurhoxisa ibhonasi yakho ye forex yeyobuncinci borhwebo. Masithi ufaka i-£500 kwaye ufumana i-£250 yebhonasi-uthatha ibhalansi yakho yokuqala ukuya kwi-£750. Ukuba uye wakwazi ukurhoxisa loo £ 750 ngqo kwi-forex broker kwaye kwi-akhawunti yakho yebhanki - oku akuyi kuba yimodeli yeshishini elihle kakhulu kwiqonga. Ngokuchasene noko, iqonga lifuna ukuba usebenzise imali yebhonasi ukurhweba.
Kananjalo, iimali zakho zebhonasi zikhenkcezisiwe de ube uhlangabezana neemeko ezithile. Kwiimeko ezininzi, uya kuba neenxalenye zebhalansi yakho ekhutshwe njengemali enokutsalwa xa udibana nobungakanani obucacisiweyo bezorhwebo. Umzekelo, umrhwebi unokukhupha i- $ 1 kwibhonasi yakho kuyo yonke i- $ 10,000 oyithengisayo.
Oku kuthetha ukuba:
Unayo i-£ 250 kwiimali zebhonasi.
Umthengisi uya kukhulula i-£ 1 kwi-£ 10,000 nganye ethengiswayo.
£10,000 x £250 = £2.5 yezigidi.
Ngaloo ndlela, kuya kufuneka uthengise i-2.5 yezigidi zeedola ukukhulula i-£ 250 epheleleyo kwaye ke-urhoxise ibhonasi iyonke.
Kwelinye icala, isixa esincinci sezorhwebo se- $ 2.5 yezigidi asiyonto imfutshane ngeenkwenkwezi-ngakumbi xa ucinga ukuba ibhonasi iyi- $ 250 kuphela. Ngale nto ithethwayo, uyakuma ithuba elingcono lokudibana neethagethi zakho ukuba:
Zifakwe kwi urhwebo usuku ebeka uninzi lwezorhwebo ngosuku
Rhoqo sebenzisa amandla okuthengisa
Ubungakanani bakho bezorhwebo ubukhulu becala
Ukuba le migaqo ingasentla ibingenzima ngokwaneleyo, kuyafuneka ukuba ujongane nemida yexesha apho iibhonasi ze-forex zihlala zihamba nazo. Eli lelinye iqhinga elisetyenziswa ngamaqonga ukwenza inkqubo yokukhupha imali yebhonasi ibe ngumngeni nangakumbi. Kwiimeko ezininzi, abarhwebi baya kukunika iintsuku ezingama-30 zokusebenzisa iimali zebhonasi phambi kokuba zirhoxiswe.
Oku kuthetha ukuba nayiphi na imali yebhonasi eseleyo kwiakhawunti yakho emva komhla wokuphelelwa iya kususwa. Ukuba ibhonasi ye-forex iza nomda wexesha elingaphantsi kweentsuku ezingama-30, kuya kufuneka uyiphephe.
Pa Izibini ezifanelekileyo
Ngamanye amaxesha, ibhonasi ye-forex inokuchaza umda kwiiparitha ezithile zemali. Ngelixa ii-majors kunye nabantwana zihlala zilungile ukusebenzisa imali yakho yebhonasi, izibini ezingaqhelekanga azinakugutyungelwa. Kananjalo, qiniseka ukuba ujonga imigaqo kunye neemeko zokuqinisekisa ukuba isibini esikhethiweyo se forex sivunyelwe.
National Izizwe ezixhaswayo
Abanye abathengisi be-forex baya kunika kuphela iibhonasi kwizizwe ezithile. Kungenxa yoko le nto kufuneka usoloko usebenzisa i-domain ehambelana nelizwe lakho lokuhlala-njengabarhwebi baneewebhusayithi ezininzi kwiindawo ezahlukeneyo.
🥇 Ubuncinci beDepho
Uninzi lweebhonasi ze-forex ziza kunye nemali encinci yediphozithi. Unyuso ludla ngokuchaza kuphela ubuninzi bemali yebhonasi evumelekileyo, ngoko ke kuya kufuneka ukuba ugrumbe imigaqo nemiqathango ukuze uyifumane.
Iibhonasi eziBalaseleyo ze Forex kwi2022-Uluhlu lokuGqibela
Ke ngoku ukuba uxhobile ngolwazi olufunekayo ukuze wandise iinzame zakho zokuzingela ibhonasi, ngoku siza kudwelisa iibhonasi zethu ze-10 eziphezulu ze-2022.
Qaphela: Njengoko abaninzi be-UK forex brokers bane-presense yehlabathi - iibhonasi zihlala ziboniswa kwiidola zaseMelika. Ungakhathazeki, isixa sebhonasi siya kuba siyafana kwi-pound sterling ($ 100 = £ 100), okanye umthengisi uya kukunika i-GBP elinganayo ($ 100 = £ 77).
1. I-AVATrade - 2 x $200 ye-Forex yeeBhonasi zokwamkeleka (Imvume yeBhonasi ivunywe nguMmiselo)
Iqela e-AVATrade ngoku linikezela ngebhonasi enkulu ye-20% ye-forex ukuya kuthi ga kwi-10,000 yeedola. Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka ukuba idiphozithi $50,000 ukuze ufumane ubuninzi bolwabiwo bonus. Qaphela, kuya kufuneka ufake idiphozithi encinci ye-100 yeedola ukuze ufumane ibhonasi, kwaye iakhawunti yakho kufuneka iqinisekiswe phambi kokuba imali ifakwe. Ngokumalunga nokurhoxisa ibhonasi ngaphandle, uya kufumana i-$1 kuyo yonke iqashiso le-0.1 olirhwebayo.
I-20% yamkelekile ibhonasi efikelela kwi- $ 10,000
Ndwendwela iAvatrade ngoku
2. Ibhonasi yeDeposithi yeMoneta
Ngaba ufuna ukunyusa idiphozithi yakho nge-50% eyongezelelweyo? Xa uxhasa iakhawunti yakho yorhwebo yeMarike yeMarketa nge- $ 500 okanye nangaphezulu, siya kukunika ibhonasi engama-50%! Nokuba sele ungumnini weakhawunti yeMarketa yeMarket okanye umthengi omtsha, yenza idiphozithi emva koko ukhethe ukusebenzisa le fomu ingezantsi ukubanga ibhonasi yakho namhlanje!
Ubuncinci bediphozithi yi- $ 250
Ngena kwiqonga leeMarketets zeMoneta, kwaye uqalise ukurhweba!
3. Markets.com - £ 25 Akukho Idipozithi Bonus Forex
I-Markets.com ngumdlali ophambili kwisithuba se-forex yase-UK. Ngobuninzi bezibini zemali ezahlulwe kuzo zonke ii-majors, abancinci, kunye ne-exotics-ibala layo lokurhweba lande kakhulu. Uya kufumana i £ 25 akukho bhonasi yediphozithi nje ngokuvula i-akhawunti. Ibhonasi yeyabathengi abatsha kuphela, kwaye akukho mda wexesha lokukhathazeka malunga.
£ 25 akukho bhonasi yedipozithi
Akukho mda wexesha lokusebenzisa imali yebhonasi
Abathengi abatsha kuphela
4. Abasebenzisanayo (Interactive Brokers) - Ibhonasi eyi $ 200 yokuBhekisa phambili ngeBhonasi
Ukuba unosapho okanye izihlobo ezinomdla wokwenza urhwebo lwe-forex kwi-intanethi, kutheni ungacingi ngokusebenzisa inkqubo yokudlulisela i-Interactive Brokers? Kuwo wonke umthengi omtsha ufumana ukuvula iakhawunti, uya kufumana i-200 yeedola.
$ 200 ibhonasi yokudlulisela
Bhatalelwa umthengi ngamnye omtsha obhekisa kuye
Ibhonasi ihlawulwe nje ukuba umthengi omtsha athengise isixa esithile
Ndwendwela ii-Interactive Brokers
5. IiMarket zeCMC- i-2 x $ 200 yeBhonasi yeBhanki eyamkelekileyo
Umrhwebi wase-UK we-CMC Markets ngoku unikezela ngebhonasi eyi- $ 200 eyamkelekileyo- kabini kabini. Nje ukuba ubeke i-200 yakho yokuqala, umrhwebi uya kudibanisa oku kunye ne- $ 200 eyongezelelweyo- ukuthatha ibhalansi yakho yokuqala kwi-400 yeedola. Uya kuthi emva koko urhwebe i-forex eyi- $ 1 yezigidi ukurhola imali yebhonasi ngaphandle. Nje ukuba ubethe i-2 yezigidi zeerandi kwintengiso, iiMarket zeCMC ziya kukunika i $ 200 eyongezelelweyo.
$ 200 ibhonasi wamkelekile- kabini
Idipozithi yokuqala yeedola ezingama-200 ifanisiwe
Ukurhoxisa iimali zebhonasi xa kuthengiswa i-milion 1 yeemfuno zorhwebo
6. I-HYCM -I-10% yeBhonasi yeDiphozithi efikelela kwi $ 5,000
I-HYCM liqonga lezorhwebo elithandwayo elibonelela bonke abathengi abatsha nge-10% yebhonasi yedipozithi. Ixabiso lebhonasi lifakwe kwi- $ 5,000- oko kuthetha ukuba kuyakufuneka ubeke i $ 50,000 ukuze ufumane ubuninzi. Kuya kufuneka uthengise amaqashiso angama-30 asezantsi ukuze ufumane i-1,000, XNUMX yeedola kwimali yebhonasi evela kumrhwebi, ke yenza le nto engqondweni.
Faka idiphozithi kwi-50,000 ukuze ufumane isixa esipheleleyo sebhonasi
Urhwebo ama-30 amaqashiso asemgangathweni okurhoxisa i-1,000 XNUMX yeedola kwimali yebhonasi
7. Itikiti - $ 30 yokuNgena kwiBhonasi yeBhonasi
Umthengisi wehlabathi we-Forex Tickmill ngoku unikezela abathengi abatsha i-30 yeedola akukho bhonasi yedipozithi. Ukuthintela ukusetyenziswa gwenxa kwebhonasi, kuyakufuneka uqinisekise iakhawunti yakho ngaphambi kokuba imali ifakwe. Iindaba ezimnandi zezokuba iTickmill ikuvumela ukuba urhoxise naziphi na iingeniso ezenziwe kwisibonelelo sakho esamkelwayo se- $ 30.
I-30 ayikho ibhonasi yedipozithi
I-100% ayinabungozi - akukho dipozithi ifunwayo
8. TemplerFX - $ 30 Akukho Idipozithi Bonus
Uhlobo olufanayo kwiTickmill, iTemplerFX ikwabonelela nge- $ 30 akukho bhonasi yedipozithi. Konke okufuneka ukwenze ukuze ufumane ibhonasi ukuvula iakhawunti kwaye uqinisekise isazisi sakho. Kuya kufuneka uthengise ubuncinci amaqashiso ama-5 asezantsi ukuze ukwazi ukurhoxisa ibhonasi, kunye nayiphi na inzuzo esebenzayo.
Ayimfuneko ukuxhasa ngemali iakhawunti yakho ukuze ufumane ibhonasi
Dlulisa inkqubo ye-KYC ngaphambi kokufumana ibhonasi
Ukuba usifundile isikhokelo sethu kuyo yonke indlela, kuya kufuneka ngoku ube nokuqonda okuqinisekileyo malunga nokuba yintoni ibhonasi ye-forex kunye nendlela esebenza ngayo. Uya kwazi ukuba abathengisi babonelela ngebhonasi yediphozithi ehambelanayo okanye akukho bhonasi yediphozithi. Nokuba yeyiphi na indlela, kuya kufuneka uqinisekise ukuba uyazi ngokupheleleyo imimiselo nemiqathango yebhonasi. Okubaluleke kakhulu, oku kugxile kwimali oya kufunwa ukuba uyirhwebe ngaphambi kokuba kurhoxiswe. Kwiimeko ezininzi, ukuguqula ibhonasi ye-forex ibe yimali ekhutshwayo kuya kuba nzima kakhulu.
Umzekelo, abarhwebi bafuna ukuba urhwebe ngemali eyi-10,000 yeedola ukuze ukhulule i-$1 kwiimali zebhonasi. Xa uqala uphinda-phinda la manani ngebhonasi enamanani amathathu, ukhawuleza kakhulu kubunqolobi besigidi seeponti. Ekugqibeleni, kusenokungabi nangqiqo ukubanga ibhonasi ye-forex ngombono wokwenza imali. Endaweni yoko, unokusebenzisa iibhonasi ukuziqhelanisa nokuphucula izakhono zakho zokurhweba kwindawo yokwenyani.
Yintoni ibhonasi ye-forex engafakwanga?
Njengoko igama lisitsho, akukho bhonasi yedipozithi ekuvumela ukuba ubange ibhonasi ngaphandle kokufaka nayiphi na imali. Endaweni yoko, kufuneka uvule iakhawunti kwaye uqinisekise isazisi sakho ukuze ufumane ibhonasi.
Yintoni ibhonasi edipozithiweyo yebhonasi ye-forex?
Ngokungafaniyo nebhonasi yedipozithi, ibhonasi yedipozithi ehambelana nayo iya kufuna ukuba wenze idipozithi. Imali yebhonasi iya kusekelwa kwipesenti yemali oyifakileyo. Umzekelo, i-100% yebhonasi ehambelana ne- $ 200 inokukunika ibhalansi yokuqala ye- $ 400, nangona ufake kuphela i- $ 200.
Ndiyirhoxisa njani ibhonasi ye-forex?
Awuyi kukwazi ukurhoxisa ibhonasi ye-forex de ube uhlangabezana neemfuneko zokurhweba ezincinci ezifunyenwe kwimimiselo kunye neemeko. Lo myinge ujikeleze i-$1 yemali yebhonasi ekhutshiweyo kuzo zonke ii-$10,000 ozithengisayo.
Ndingahlangabezana njani nezona mfuno zisezantsi zorhwebo kwibhonasi ye-forex?
Ngalo lonke ixesha uvula kwaye uvale indawo ye-forex, ubungakanani bezorhwebo buya kuncitshiswa kwithagethi yakho. Umzekelo, ukuba ubungakanani bezorhwebo yi- $ 5,000 xa uthenga kwaye uthengisa isibini, ngewawukhuphe i-10,000 yeepawundi kwimfuno zorhwebo ezincinci.
Ngaba ndifanele ndisebenzise amandla xa ndijolisa kwibhonasi ye-forex?
Kwelinye icala, ukusebenzisa amandla kuya kwandisa ubungakanani borhwebo lwakho lwe-forex kwaye ke-yonyuse isixa okwaziyo ukusula kwimfuno ekujolise kuyo yebhonasi. Nangona kunjalo, awusoze usebenzise uxinzelelo ngenjongo yokuleqa ibhonasi ye-forex.
Ngaba ndingayisebenzisa ibhonasi yam yaphambili kuyo nayiphi na imali?
Kwiimeko ezininzi, abathengisi be-forex bayakuvumela ukuba usebenzise imali yakho yebhonasi nakweyiphi na imali. Nangona kunjalo, abanye oomrhwebi banokukuthintela kwizikhundla eziphezulu kunye nabantwana.
Ngaba kufuneka ndiqinisekise isazisi sam ukuze ndifumane ibhonasi ye-forex?
Ukuba ubanga ibhonasi yedipozithi, kuyakufuneka uqinisekise isazisi sakho ngaphambi kokuba kufakwe imali yebhonasi. Oku kukuthintela ukusetyenziswa gwenxa kwebhonasi.
Imiqondiso ye-Forex yasimahla Amaqela eTelegram ka-2022
Ukurhweba kwangaphambili kwabaqalayo: Indlela yokuThengisa i-Forex kunye nokuFumana eyona Platform ilungileyo 2022
Iimpawu ezibalaseleyo ze Forex 2022
Ababhengezi be Forex ababalaseleyo 2022